तानाशाह ओली: आफू धम्काउँदै हिड्ने, अरु बोले धम्की !
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि चर्को रोष व्यक्त गरे । देशव्यापी दौडाहाका साथ कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरिरहेका उनको शनिबारको आक्रोश पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि केन्द्रित भयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई गुमराहमा राखेको, धम्क्याएको र अलमल्याएको आक्षेप ओलीले लगाएका छन् । जब कि शुक्रबारको वक्तव्यमा अदालतबारे केही विवरण उल्लेख छैन । वक्तव्य निकालेका केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ओलीको प्रतिक्रियापछि फोनबाट छलफल गरेका थिए । एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले कान्तिपुरसित ‘मनमा केही कुरा लागे बोल्नैसमेत नहुने अवस्था आएको’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘हामीले संविधान पढेको हो । त्यसबाट हेर्दा के देखिन्छ, त्यत्ति भनेको हो । अब संविधान पढ्न पनि प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिनुपर्ने रु’ उनले भने, ‘अरिंगाल र साइबर सेनासँग भिडेर साध्य हुँदैन । अब दोहोरी नखेल्ने निष्कर्ष निकालेका छौं । जति मन लाग्छ, गाली गरुन् ।’
भारतमा सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशबारे लेखेबापत अवहेलना मुद्दा खेपेका कानुन व्यवसायी प्रशान्त भूषणका विषयमा पूर्वन्यायाधीशहरूले अभिव्यक्ति दिएका थिए । श्रीलंकाको न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्दा विश्वभरका कैयौं न्यायाधीश र उनीहरूको नेटवर्कले प्रतिक्रिया दिएको अधिवक्ता गोविन्द बन्दी बताउँछन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको वक्तव्यले संविधान र त्यसबारे ओली सरकारले गरेको व्यवहारबारे धारणा सार्वजनिक गरेकाले विचाराधीन मुद्दाबारे त्यसले सरोकार नराख्ने उनले दाबी गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विचारलाई निषेध गर्न खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने देशव्यापी कार्यक्रमका दौरान तिखो र अत्यन्त आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षले सत्ताको बल देखाइरहेको छ, शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ । यसले समाजलाई मुडेबलतर्फ डोर्‍याउँदै छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘यस्ता गतिविधिले अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा झैं समाजमा विभाजन गर्ने खतरा छ । मान्छे जम्मा गरी जुलुस देखाएर हामी केही पनि मान्दैनौं भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् ।’
आफूलाई सबै छुट!
प्रधानमन्त्री पक्षधरहरू भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको वक्तव्य गलत भएको र त्यसले अदालतलाई प्रभावित पार्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालका अनुसार, एकातिरबाट ‘फायर’ खुलेपछि अर्कोतिरबाट त्यसको जवाफ आएको हो । ‘पक्षले म मुद्दा जित्छु भन्नु स्वाभाविक हो । उसले आफ्ना पक्षमा तर्करअभिव्यक्ति दिन्छ । विपक्षीको हकमा पनि त्यही हो । मैले मुद्दा गरेको छु, अब चुप बस्छु, बोल्दिनँ भनेर कोही पनि भन्दैन,’
दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेको निर्णय सही हो भन्नु र मुद्दा जित्छु भन्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ । विपक्षी नेताहरूको पनि त्यस्तै कुरा आउला । तर तटस्थ रहनुपर्ने न्यायाधीशहरूले वक्तव्य जारी गरेर अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजे ।’ संविधानले नै पूर्वन्यायाधीशहरूलाई कुनै पक्षको पैरवी गर्न रोक लगाएको उल्लेख गर्दै दाहालले कान्तिपुरसित भने, ‘उहाँहरूले वक्तव्यबाट एउटाको पक्ष लिएको देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले यसो नगर्नु भनेर सम्झाउनु स्वाभाविकै हो ।’ आजको कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन्।